Mankalazà ny Andro Miakatra, Fiangonan'izao tontolo izao Switzerland (WKG)
Ny Fiakaran'ny Fiakarana dia tsy iray amin'ireo fankalazana lehibe amin'ny alimanaka kristiana toy ny Krismasy, Zoma tsara ary Paska. Mety hohamaivanintsika ny maha-zava-dehibe an'ity tranga ity. Taorian'ny troran'ny hazo fijaliana sy ny fandresen'ny fitsanganana amin'ny maty dia toa tsy mitombina izany. Tsy mety anefa izany. Tsy nijanona 40 andro fotsiny i Jesosy tafatsangana ary niverina tany amin'ny tanin'ny lanitra azo antoka, satria efa vita ny asa eto an-tany. I Jesoa nitsangana tamin'ny maty dia mitoetra mandrakizay ao anatin'ny fahafenoany amin'ny maha-olombelona sy nanolo-tena tanteraka ny maha-olona antsika Andriamanitra1 Timoty 2,5: 1; 2,1 Jaona).
Ny Asa 1,9: 12 dia milaza ny fiakarana. Taorian'ny niakarany tany an-danitra, dia nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy niaraka tamin'ny mpianatra nilaza hoe: Inona no mijoro eto mijery ny lanitra? Ho avy izy rehefa nahita azy miakatra any an-danitra. Izay no mahatonga azy roa mazava be. Any an-danitra i Jesosy ary mbola hiverina izy.
Ao amin'ny Efesiana 2,6 dia nanoratra i Paoly hoe: "Andriamanitra nanangana antsika ka nametraka antsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Efa imbetsaka efa henontsika ao amin'i Kristy". nalevina ary nitsangana, fa izao miaraka aminy izao any an-danitra ".
Ao amin'ny Kolosiana 3,1: 4, dia nohamafisin'i Paoly io fahamarinana io:
«Efa maty ianao ary ny fiainana niafina ao amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa raha Kristy, ny fiainanao no hanambara ny tenany, dia hiara-miseho Aminy miaraka aminao koa amin'ny voninahitra ». "Ao amin'i Kristy" dia midika hoe miaina ao anatin'ny tontolo roa: ny ara-batana sy ara-panahy. Tsy ho takatry ny saintsika mihitsy izao fa izao no tena tenin'i Paoly. Rehefa miverina i Kristy dia hahita ny fahafenoan'ny mombamomba antsika vaovao isika. Andriamanitra dia tsy te-hamela antsika amin'ny tenantsika (Jaona 14,18), fa amin'ny fifandraisana amin'i Kristy dia tiany ny hizara ny zavatra rehetra amintsika.